Wararka Suuqa Kala Iibsiga Caawa: Jesse Lingard Oo Sharuud Ku Xiray Heshiis Kordhinta Manchester United, Real Madrid Oo Xiiseeneysa Antonio Rudiger Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga Caawa: Jesse Lingard oo sharuud ku xiray Heshiis kordhinta Manchester United, Real Madrid oo Xiiseeneysa Antonio Rudiger iyo Qodobo kale
September 8, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England Jesse Lingard ayaa doonaya dammaanad qaadka waqtiga uu ku ciyaarayo Old Trafford xidigan ayaa iska diiday dalab qandaraas ah oo uga yimid Manchester United, sida ay sheegtay ESPN .
Valencia ayaa iibin doonta Jose Luis Gaya mustaqbalka dhow haddii uusan saxiixin heshiis cusub, Barcelona ayaa 26-jirka ka dhigatay bartilmaameedka ugu sarreeya ee baadi-goobka badalka muddada dheer ee Jordi Alba, sida laga soo xigtay Mundo Deportivo .
Zinedine Zidane ayaa rajeynaya inuu sii wato xirfadiisa tababarenimo isagoo qabanaya xulka qaranka France, sida ay qortay Le Figaro .
Sergi Roberto ayaa ku dhow inuu heshiis cusub u saxiixo Barcelona, ​​sida ay qortay Mundo Deportivo .
Galatasaray ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo Amadou Diawara ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga Turkiga. Calciomercato
Inter ayaa qorsheyneysa inay u dhaqaaqdo garabka Bayern Munich Corentin Tolisso – sida laga soo xigtay Tuttosport .
Juventus ayaa weli dooneysa weeraryahanka Fiorentina Dusan Vlahovic – sida ay ku warameyso Calcio Mercato .
Real Madrid ayaa kula biirtay Bayern Munich tartanka daafaca Chelsea Antonio Rudiger. sida laga soo xigtay Fichajes kula
CSKA Moscow ayaa isku dayaysa inay soo gabagabeyso heshiiska xiddiga garabka uga ciyaara Milan Samu Castillejo – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .